यसकारण मारिए घैटे, यस्तो छ रामकहानी ~ FMS News Info
यसकारण मारिए घैटे, यस्तो छ रामकहानी
पटक–पटकको पक्राउ र रिहाईको लुकामारीपछि ‘इन्काउन्टर’
ठ्याक्कै १० वर्षअघि काठमाडौं सहरको मध्यभागमा अवस्थित बागबजारको सो गर्ल नामक रेस्टुराँको छतबाट बाटोमा रोकिराखेको प्रहरीको गाडीमा बियरको बोतल र इँटा प्रहार भयो । गाडीको सिसा फुट्यो र अन्यत्र सामान्य क्षति भयो ।
प्रहरीको गाडीमा आक्रमण गर्ने त्यतिबेला भर्खरै जन्मिएको कुमार श्रेष्ठ घैटेको आपराधिक समूह थियो । खासमा अर्को अर्थात प्रतिस्पर्धी समूह काभ्रेलीका केटाहरु ठानेर घैटेको समूहले माथिबाट आक्रमण गरेको थियो । तर, त्याहा प्रहरी अपराध महाशाखा (केरकार) का निमित्त प्रमुख प्रहरी नायम उपरीक्षक (डीएसपी) सर्वेन्द्र खनालको टोली थियो ।
प्रहरी भएको सुईको पाएपछि घैंटेको समूह भाग्यो । पछि घैंटे समूहले केस सामसुम पार्‍यो । १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भनेजस्तै प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने तिनै घैंटे महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरीकै गोलीले मारिए, ३ भदौमा । संयोग कस्तो प¥यो भने उतिबेला महाशाखाका निमित्त प्रमुख रहेका खनाल अहिले त्यसका प्रमुख छन् ।
प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेर चर्चामा आएको घैंटेको समूह त्यसयताको एक दशक अपराधको दुनियाँमा जगजगी मच्चाउन सफल भयो । बाँच्दा अपराध कर्मबाट जसरी चर्चामा रहे, प्रहरी भिडन्तमा मारिएपछि पनि गुमनाम भएनन् ।
एक वर्षअघि महाशाखाकै टोलीसँगको इन्काउन्टरमा नेकपा एमालेनिकट गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिएपछि नै घैंटेले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए । त्यही भएर उनी चरी मारिए लगत्तै मलेसिया हानिए ।
त्यसपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा काँग्रेस आईका स्थानीय नेताको संरक्षणमा बिताए । गत बैशाखको महाभूकम्पका बेला घैंटे भूकम्पपीपिडतलाई राहत दिन समाजसेवीको आवरणमा नेपाल आएका थिए । तर, उनले राहत होइन आहत दिए ।
घैटेले व्यवसायीसँग राहतका लागि भनेर जबरजस्ती रकम असुलेका थिए । पेस्तोल देखाएर राहत माग्ने र गाउँगाउँ पुगेर बाँड्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ । महाशाखाका एसएसपी खनाल भन्छन्, ‘समाजसेवाको आवरणमा धेरै मानिसलाई दुःख दिएको रहेछ ।’
निर्माण व्यवसायी, अस्पताल सञ्चालक, म्यानपावर र घरजग्गा व्यवसायीलाई घैंटेले धम्क्याएर रकम असुल्ने गरेका उजुरी समेत महाशाखामा आउन थालेका छन् ।
केही समयअघि मात्रै घैंटेको समूहले गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनमार्फट वीरगञ्जमा एक करोड रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो । उक्त ठेक्का घैंटेले धम्क्याएर आफ्नो फर्मलाई पारेको प्रहरी बताउँछ । घैंटेले सामाखुसी र गोंगबु क्षेत्रमा व्यवसायीबाट असुली गर्थे ।
एक वर्षअघि चरी मारिएपछि नयाँबजार क्षेत्रमा समेत असुली क्षेत्र विस्तार गरेका थिए उनले । प्रहरी विवरण अनुसार घैंटेले सामाखुसी र गोंगबु क्षेत्रका हरेक विद्यालय, कलेज, म्यानपावर, तरकारी पसल र कवाडी गोदामहरुबाट मासिक १० प्रतिशत रकम संकलन गर्न केटाहरु परिचालन गरेका थिए ।
जसमध्ये सात प्रतिशत घैंटे आफैले राख्थे भने बाँकी परिचालित केटाहरुलाई बाँड्थे । ‘धेरै मान्छे मुख खोल्न डराउँछन्, तर उनीहरुबाट रोएर बाँचेकाको संख्या ठूलो छ,’ खनाल भन्छन् । घैंटेले निर्माण व्यवसायी महासंघ र निर्माण कम्पनीबाट छुट्टाछुट्टै कुल ठेक्कापट्टाको ०.२५ प्रतिशत हिस्सा लिने गरेको समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
कन्स्ट्रक्सनले बाग्मती करिडोर निर्माण, गोंगबु–गल्कोपाखा सडक, कालीमाटी–कीर्तिपुर सडक पिच गर्ने, बबई सिँचाई आयोजना र जनकपुर–बर्दिबास रेलवे निर्माणको ठेक्का लिएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानबाट यी ठेक्का लिन घैंटेको समूहले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ठेक्कामा भाग लिने प्रक्रियाबाटै रोकेको पत्ता लागेको थियो ।
‘सके प्रतिस्पर्धामा आउनै नदिने, त्यहाँसमेत रोक्न नसके ठेक्का पाएका कम्पनीबाट प्रतिशत लिने गरेको देखियो,’ खनालले अनुसन्धानबाट निस्केको निश्कर्ष सुनाए ।
घैंटे मारिएको भोलिपल्ट ४ भदौमा टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा गोंगबुका एक होटल व्यवसायी प्रहरीले दुई हात जोडेर धन्यवाद दिइरहेका थिए । उनी भनिरहेका थिए, ‘पेस्तोल ताकेर पैसा मागेपछि नदिएर के गर्ने ? कसलाई भन्ने ? कसले दिन्छ सुरक्षा ?’
यस्ता गुनासा धेरै भएपनि व्यवसायी प्रहरीकहाँ उजुरी दिन जाँदैनन, कुनै पनि बेला निसानामा परिने डरले । घैंटे मारिएपछि भने केही लिखित उजुरी आएका छन् तर नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ।
‘अझैपनि उसका केटाहरु छन् । हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ’ त्यस्ता व्यवसायीको भनाई उदृत गर्दै खनाल भन्छन् । जबरजस्ती रकम असुल्न थालेपछि प्रहरीले राजधानीका गुण्डा समूहविरुद्ध विशेष टोली परिचालन गरेको थियो । हतियारसहित घुमेर यस्ता समूहले व्यवसायीलाई टार्गेट गरेको सुराक महाशाखामा दुई महिनाअघि नै पुगेको थियो ।
त्यही अप्रेसनको सिलसिलामा घैंटेसँग इन्काउन्टर भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले नियमित चेकजाँचका क्रममा घैंटेले फायरिङ खोलेपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
तर, घैंटेकाम आफन्त र नेपाली काँग्रेसका उनीनिकट सभासदहरुले भने त्यसलाई हत्याको संज्ञा दिएका छन् । जसले गर्दा घैंटेको मृत्यु यसअघि इन्काउन्टरमै मारिएका भनिएका दिनेश अधिकारी चरी काण्डजस्तै विवाद र बहसमा तानिएको छ ।
अपराधको संसारमा निर्धक्क सयर गर्दासमेत राजनीतिक नेता र प्रहरीकै कतिपय उपल्ला अधिकारीको संरक्षणका कारण घैंटेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन प्रहरीले ।
पटक पटक पक्राउ र रिहाईको लुकामारीले खाजित भइसकेको थियो प्रहरी । त्यसैले प्रहरी कुख्यात अपराधीहरुलाई इन्काउन्टर गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनसक्छ ।
तर, यसले इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले जोसुकैलाई गोली हान्न सक्ने खतरा रहेको अपराधशास्त्रमा दक्खल राख्ने अधिवक्ता रजितभक्त प्रधानांग बताउँछन् । भन्छन्, ‘कानुनभन्दा प्रहरीमाथि छ भन्ने सन्देश गएमा त्यसले अर्को संकट निम्त्याउन सक्छ ।’
आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा कुमार घैंटेले लेखेका छन्, ‘भूकम्पपछिको नयाँ जीवन । नयाँ सोच, नयाँ जोसका साथ अब बाँकी भएको जिन्दगी यो मेरो देशका लागि । जय नेपाल ।’
तर उनलको नयाँ सोच र जोस पुरानै स्वरुपमा दोहोरिएकाले हुनसक्छ, देशका लागि भन्दा पनि आपराधिक कर्मका लागि बढी उर्जाशील बन्यो र अन्ततः प्रहरीको गोलीको सिकार भए । नेपाल साप्ताहिकबाट भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस